Global Voices teny Malagasy » Haj Agha No iantsoan-dry Zareo Ahy — Filalaovana Ny Revolisiona Iraniàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Avrily 2016 3:19 GMT 1	 · Mpanoratra Tori Egherman Nandika avylavitra
Sokajy: Iràna, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Pikantsary avy amin'ny lalaon'ny Revolisiona 1979
Efa lalao ankehitriny ilay revolisiona tao Iràna tamin'ny 1979. Natambatr'ilay mpamorona lalao, Navid Khonsari,i reo zavatra niainan'ny fianakaviany sy ny fikarohana nataony tamin'ny antsipirihany mba hamokarana lalao iray azonao isafidianana izay dingana tiana holalaovina. Isaky ny safidy ataonao dia entin'ilay lalao ho amin'ny làlan'ny fitantaràna iray hafa ianao.
Zavatra iray na roa momba ny fampilalaovana no fantatr'ilay mpamorona ny Revolisiona 1979. Niasa tamin'ireo lalao Grand Theft Auto i Navid Khonsari. Feon'ireo vitsivitsy mpisehatra malaza no ao anatin'io lalao io, isan'ireny ny fandraketana lahatsary tao an-tranon'ny raibeny.
Tao anaty tafa iray ho an'ny CBC , nitantara ireo fahatsiarovana momba ny revolisiona tao Iràna avy amin'ny fahazazàny manokana i Khonsari.
“Nahita fanantenana aho. Nahita ny mety hisian'ny fiovàna. Nahita olona tonga niaraka sy nifanorokoroka. Vahiny.”
Volana vitsy taorian'izay, niafina tao an-trano izy raha lasa natetika sy nipoapoaka kosa ny basy natao tifi-danira ary ny herisetra.
“Zavadehibe aminay ny tsy fanaovana ho tsinontsinona ny toerana goavana noraisin'ireo vehivavy nandray anjara sy nanao sorona goavana nandritry ny revolisiona — ary indrindra fa tena niharam-pahavoazana akaiky.”
Hahatezitra an'i Tehran?
Efa nanambara sahady ny Fox News  hoe “mahatezitra an'i Tehran” ilay lalao. Mety midika izany fa ilaharana ny filalaovan'ireo Tehranis azy.
Tsy raharahain'i Khonsari io hatezerana io. Tsapany fa tantaran'ny vahoaka nanao “dia ho amin'ny fanovàna” no tantarainy, ary tsy nàka firehana politika izy.
Tantara misy larony.
Noresahan'ny Global Voices niaraka tamin'i Navid Khonsar ny Revolisiona 1979 ; Zoma Mainty.
GV: Azonao hazavaina ve ny anjara toeran'ny vehivavy ao anatin'ilay lalao?
Tamin'ny fikarohana sy fandrafetana ny Revolisiona 1979: Zoma Mainty, Zavadehibe aminay ny tsy fanaovana ho tsinontsinona ny toerana goavana noraisin'ireo vehivavy nandray anjara sy nanao sorona goavana nandritry ny revolisiona — ary indrindra fa tena niharam-pahavoazana akaiky. Nitafa taminà vehivavy maromaro izay nandray anjara na niaina tao Tehran nandritry ny revolisiona izahay. Avy aminà fotokevitra ara-pinoana sy sarangam-piarahamonina samihafa izy ireny. Tianay mba ho ny tena fanehoana ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny revolisiona no ho ampahafantarina.
Bibi Golestan no iray amin'ireo mpandray anjara fototra nosoratanay ho an'ilay lalao. Amin'ny maha-vehivavy tanora injeniera azy dia vavolombelona nahita maso ny fahantràna sy ny tsy fitoviana tany amin'ireo vohitra ivelan'i Tehran izy. Nandrisika azy izany ho lasa mpitarika mavitrika tao anatin'ny Antoko Tudeh [antoko kaominista ao Iràna]. Asehonay amin'ny anjara andraikitra samihafa ihany koa ireo vehivavy. Isan'izany i Shirin Shirazi, renin'ny iray amin'ireo tena mpifanandrina mitàna ny anjara toeran'i Reza Shirazi. Mijery anatin'ny ngidy ny fanjavonan'ny “fomba fiainany” izy mandritra ilay revolisiona. Ireo mpandray anjara amin'ny 1979 dia fitaratry ny olana sarobahàna atrehan'ireo vehivavy avy amin'ny saranga sy fotokevitra samihafa.
GV: Inona no pitik'afo tao ambadik'ilay lalao?
Ny pitik'afo dia avy amin'ny dia nalehako tany Iràna. Rehefa tonga tao amin'ny vohitra kely iray aho, tany Atsimo, nanatona ahy ireo tanora Iraniana nahafantatra ahy avy amin'ny asa nataoko ho an'ireo lalao Grand Theft Auto. Tena nanohina ahy ny fiondrànana be ara-kolontsaina sy ny herin'ny lalao an-dahatsary mba ho fampifandraisana. Nohazavain'ireny ankizy ireny tamiko ny fahatsapan'izy ireo ho toy ny mahafantatra an'i Etazonia, niainga avy amin'ny zavatra niainany tamin'ireny lalao ireny. Ny zavatra teny ankafizin-dry zareo dia ahitàna ny fiantsenàna, ny fihinanana, ny fandehanana mivoaka hiasa, ny fihainoana mozika, fandehanana any aminà klioba. Toy ny mandia ny tany Amerikàna no fahatsapana iainan-dry zareo. Nahatonga ahy hieritreritra izany hoe, maninona raha mamorona lalao iray aho izay mitondra ireo mpijery ho amin'ny TRANGA TENA NISY ary manolotra vintana ho an'ireo mpilalao mba hametraka ny tenany ho ao anaty tontolo iray izay aseho miaraka amin'ny tantara tsy nasiana fanovàna? Ahoana raha azoko atao ny manome traikefa misy dikany no sady manintona ho an'ny vahoaka?
Ny famoronana lalao tahaka izao dia manome vintana hanolorana ny tantara tsy ho toy ny mainty sy fotsy ihany, fa mba asiana larony. Ny niainana tao anatin”ilay revolisiona no toa dingana voalohany lafatra indrindra tamin'ny fandrafetana ity karazany vaovao ity: Vérité Games (Tantaran'ny Fahamarinana).
Satria ny 1978/79 tao Iràna dia fotoana nafampàna sy nanjakan'ny barofo, izay nifandonan'ny hevitra maro sy faran'izay nanahirankirana ihany ho an'ny tsirairay, dia toy ny famoronana tontolo iray mahavariana sy toetrandro mampientana ho an'ny mpijery ilay izy.
Valiny avy amin'ny media sosialy
” Haj Agha no iantsoan-dry zareo ahy.”
Vao avy navoaka tao amin'ny Steam indrindra ilay lalao.
Ezahan'ireto mpilalao ireto ny hamàsoka ilay mpitsikilo:
Watch our #letsplay  #1979revolution  – https://t.co/fhP2mHwPTh  when we panic we get confused! #YouTubeGamers  #games  pic.twitter.com/hwFtthpYdr 
Jereo ny #ndehahilalao #revolisiona1979 avy aminay, rehefa misavoritaka isika, lasa miroaroa saina
Azonareo jerena ny We love story games milalao ilay lalao ao amin'ny YouTube:
Toy ireo hafa marobe, tsy andrin'i Arman Ghorbani ny hahafantatra bebe kokoa momba ireo fotoana niainan'ny ray aman-dreniny.
My parents lived the #1979Revolution  in #Iran  and I've studied it deeply so I can't wait to experience @1979theGame . https://t.co/y040nvUI7k 
Niaina ny #revolisiona1979 teto #Iràna ireo ray aman-dreniko ary nandalina lalina ny momba azy io aho, noho izany tsy andriko izay hanandramana azy
Variana amin'ilay andalana “Haj Agha no iantsoan-dry zareo ahy” i Kevin Miston :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/11/81251/
 Fox News: http://www.foxnews.com/tech/2016/04/06/video-game-depicts-irans-1979-revolution-angers-tehran.html
 April 8, 2016: https://twitter.com/StoryConscious/status/718398058623537154
 April 7, 2016: https://twitter.com/ArmanSays/status/717919816737132544